Yiziphi izimpawu ezikumema ukuthi uthenge emakethe yamasheya? | Ezezimali Zomnotho
Yiziphi izimpawu ezikumema ukuthi uthenge emakethe yamasheya?
Esinye sezikhathi ezinqumayo kunazo zonke ekutshalweni kwemali ngokungangabazeki lapho u-oda ama-oda akho okuthenga amasheya ezimakethe zezimali. Ngokuya ngentengo oyenza ibe semthethweni, umsebenzi uzoba namandla amakhulu noma amancane wokubuyekeza. Kubaluleke kakhulu ukuthi ukuthenga kwenziwe emazingeni anenzuzo enkulu yezintshisekelo zakho njengomtshali-zimali omncane naphakathi. Futhi-ke awukwazi ukukhohlwa ukuthi akekho umuntu okuphoqa ukuthi uvule izikhundla. Kepha kuphela kuzimo ezilungele kakhulu nalapho uneziqinisekiso ezinhle kakhulu zokuziqedela ngempumelelo.
Ukuthenga emakethe yamasheya yingxenye yokuqala ye- inqubo yokutshala imali ngakho-ke kufanele uyinakekele ngokunemba okukhulu. Awukwazi ukuzenza ngaphandle kwanoma yiluphi uhlobo lwecebo, kepha ngokuphambene nalokho, ungakwenza ngaphansi kokuhlaziywa kwezinhloso zakho. Kufanele uzibuze ukuthi ufunani ngokuthatha izikhundla, hhayi kuphela esitokisini, kepha nakunoma iyiphi impahla yezezimali. Kusuka kuzinsimbi eziyigugu kuya kunoma iyiphi imali ebhalwe ezimakethe ezinkulu zezezimali.
Ukwenza kube lula kuwe ukuthi wazi ukuthi yimaphi amazinga okufanele ukwenze kube semthethweni ukuthengwa kwamasheya, sizokunikeza imibono ethile yokwenza le nhlangano ibe yinto ebonakalayo. Noma yimaphi amazinga afanele kakhulu wokuthuthukisa ukusebenza kwephothifoliyo yakho yokutshala imali. Ngeke kube nzima kakhulu kuwe ukuthi usebenzise le mihlahlandlela yesenzo. Uzodinga kuphela intshisekelo encane nokuqeqeshwa okuningi ukuze ukwenze. Ukuze kuthi kusukela manje utshalomali lwakho luqale ukuvikeleka kakhulu.
1 Ukuthenga emakethe yamasheya: izitayela eziya phezulu
2 Ukumelana nokwephuka
3 Ngokwakheka kwangaphansi okuphindwe kabili
4 Ukwakheka kwezikhala ezinamandla
5 I-Oversold: ukusabela okuphezulu
Ukuthenga emakethe yamasheya: izitayela eziya phezulu
Uma kunesimo esivumayo sokuthenga amasheya, lokho akusikho okunye ngaphandle kokuthi ukuthambekela okujwayelekile kwezimakethe zezimali kucace bha. Uzoba neziqinisekiso eziphakeme zokukhulisa ukusebenza. Ngethuba elincane lokuthi ungaphutha esinqumweni. Okungenani esikhathini esifushane naphakathi. Kule ndlela, ngeke ube nenye indlela ngaphandle kokuvula izikhundla ezimeni lapho imakethe yamasheya icindezelwa khona. Akumangalisi ukuthi unokuningi ongakuzuza kunokulahlekelwa.
Kulezi zimo, ngeke ukwazi ukumelana nokuthumela i-oda ebhange lakho elijwayelekile ukuyofuna imbuyiselo kulokho okulondolozile. Iphrofayili oyethula njengomtshalizimali ayinandaba. Ngoba empeleni, kuvumelekile kuzo zombili izindlela zokulondolozwa kwemvelo kanye nezokucabangela kuphela. Akukho okuhlukile okufanele ukukhuphula ukuthenga kwakho ezimakethe zezezimali. Vele, noma kunjalo ngaphansi kwentengo yokuthenga engcono kakhulu. Njengoba bezokunikeza umkhawulo omkhulu wokuqoqa izinzuzo kukho konke okwenzayo.
Umgomo okufanele uwufinyelele ukuthi umehluko phakathi kwentengo yokuthenga nokuthengisa kwehluka kakhulu ngangokunokwenzeka. Kuzoba uphawu olucacile lokuthi izinto bezikuhambela kahle kakhulu ezimakethe zezimali. Konke okungekhona lokhu kuzoba ukubuyisela emuva izintshisekelo zakho. Akumangalisi ukuthi konke okungaphumeleli ukwehluleka ozoba nakho njengomtshali-zimali omncane. Yize kumangaza kakhulu ukuthi ungahluleka ezibalweni zakho kuzimo ezinamandla.
Ngenye yezimo ezinhle kakhulu ukuvikela izintshisekelo zakho. Ukusizakala ukwephuka kokumelana kuzoba ngenye yezinjongo eziseduze kakhulu zokuthuthukisa ukuthenga ezenzweni. Akumangalisi ukuthi ngamazinga lapho amanani amasheya aqhutshwa khona. Ngokuvikeleka okukhulu ngomphumela wokusebenza kwemakethe yamasheya. Lawa mazinga kusilinganiso senani asetshenziswa abathengi ukubeka izimo zabo.
Ingcuphe okucatshangwa yilo msebenzi ukuthi ingaba yinto nje edukisayo kubatshalizimali. Ngoba bangahle baye ezikhathini ezimbalwa zemakethe yamasheya, yize kungeyona inhlangano ejwayelekile ezimakethe zezezimali. Kepha kunalokho okuphambene nalokho, kuyivela kancane ekwakhekeni kwayo. Kunoma ikuphi, lapho ama-resistor ephuka, ngeke ube nenye indlela ngaphandle kokuyisebenzisa futhi uthenge nganoma iyiphi intengo. Kuzokusiza ukuthi uthuthukise ibhalansi ye-akhawunti yakho yokuhlola kusuka manje kuqhubeke.
Ukubalekela phezulu phezulu kulezi zimo kunodlame olukhulu impela. Ngamandla aphezulu wokubuyekeza, ikakhulukazi ngamagama amafushane selokhu athuthukiswa. Ngaphezu kwalokho, kungumfanekiso ongawubona ngeso lengqondo ngokucaca okucacile kwe-crystal. Ngeke udinga ulwazi olukhethekile, noma usebenzise ihluzo eliphezulu kakhulu. Ukunyakaza okungabonwa nganoma iyiphi iphrofayili yabatshalizimali futhi ngaphandle kokuhlukile. Njengoba ukwazile ukuqiniseka kokunye okwenziwe eminyakeni edlule.
Ngokwakheka kwangaphansi okuphindwe kabili
Ngaphandle kokungabaza, phansi okuphindwe kabili kuzoba ngesinye sezimpawu ezicacile zokuthi uqale ukuthenga kwakho ngamanani. Ngoba empeleni, inezimpawu eziqinile ze-bullish. Ngisho nangaphezulu kwezinye izibalo esikhwameni sokubaluleka okukhethekile. Inkinga enkulu ukuthi kuzofanele unake kakhulu ukwakheka kwalesi sibalo lapho kuma khona ukuwa. Kepha uma uyithola, akungabazeki ukuthi uzoba nengxenye enkulu yemisebenzi eyenziwayo ekusebenzeni kwakho kunoma iyiphi imakethe yezezimali.
Ngokungafani nezinye izibalo, ngezansi okuphindwe kabili kuthwala isikhathi eside kuthrendi yalo entsha. Kungathatha iminyaka eminingi ukuthi ubuyele ku-bearish noma nge-lateral. Ngaphezu kwalokho, kungukunyakaza okuvame ukukhula ngokuvama okuthile enanini lamasheya. Hhayi ize, izohlala ikhona minyaka yonke ngezinkampani ezibalulwe kuma-indices emakethe yamasheya amakhulu. Ngoba okuphansi okuphindwe kabili isitobhu esichazayo ekuweni kwezintengo. Kunoma iyiphi impahla yezezimali lapho ungathatha khona izikhundla kusuka manje kuqhubeke.
Enye yezinjongo okufanele uzibheke ekutshalweni kwakho ukuthola la mazinga okungena ezimakethe zezezimali. Ngoba bazokunikeza iziqinisekiso ezinkulu ukuthi ukuvela kwephothifoliyo yakho yokutshala imali kuzoba kuhle kakhulu. Ngamandla wokubuyekeza aphakeme kakhulu nangaphezulu kwalokhu okwenziwe ngamanye amasu okutshala imali. Uma-ke isinqumo sakho kungukuthenga amasheya, ngeke uzisole isu elithathiwe.
Ukwakheka kwezikhala ezinamandla
Esinye sezibalo ezizokhomba ukuthathwa kwezikhundla kumanani afanele kakhulu emholweni oguqukayo kazwelonke. Ngoba empeleni, ibuye ibe nemiphumela ebaluleke kakhulu ye-bullish. Yize unenkinga enkulu yokuthi uzodinga usizo lomdwebo onamandla lapho kuboniswa ukwakheka kwalesi sibalo esibalulekile. Akubona bonke abatshalizimali abazoba sesimweni sokufeza lezi zinhloso ezifunekayo. Ngoba kuyisibalo esingaziwa ngokushesha futhi kuzo zonke izimo. Kuphela uma unolwazi olunzulu ezimakethe zezezimali lapho uzokwazi ukuba sesimweni esingcono sokuyithola ngesikhathi. Ngoba lokhu kungenye yezinkinga zabo, kufinyelela igebe le-bullish ngesikhathi esifanele lapho bakhula khona. Kuzoba esinye isihluthulelo sokwenza imisebenzi isebenze.
Ngokungafani nezinye izibalo ezinamandla ngokwengeziwe, izikhala ze-bullish zixhunywe kuzikhathi ezimfushane. Zilungele kakhulu imisebenzi yokuqagela eyengeziwe. Futhi nge-intraday noma okufanayo, ukunyakaza kuthuthukiswe kuseshini efanayo yokuhweba. Lokhu kungenye yomehluko okhonjiswa yizikhala ezikhona kusukela zakhiwa. Noma kujwayelekile, futhi ngokuhamba kwesikhathi, kuvame ukugcwala. Ukuze uqhubeke nokwenyuka kwangaphambilini.
I-Oversold: ukusabela okuphezulu
Futhi lezi zimo zithambekele kakhulu kuwe ukuthi uthenge amasheya ezinkampani ezisohlwini. Ngezinga eliphakeme lokuphepha ezimweni eziningi. Akunandaba, ungaba nohambo olufushane kakhulu olubheke phezulu. Ngezinga lokuthi kungaba ngesesikhashana nokugcina isikhathi. Kufanele usheshe kakhulu lapho wenza ngokusemthethweni ukusebenza kwakho lapho uthenga noma iyiphi impahla yezezimali. Futhi akubona bonke abatshalizimali abasesimweni esihle kakhulu sokuvula izikhundla ngaphansi kwalezi zici zezimakethe zezimali.
Kuyisikhala emazingeni entengo lapho izikhundla zokuthengisa zidlula kakhulu abathengi. Futhi njengokusabela kulo mkhuba, ukulungiswa komthetho wokunikezwa nokufunwa kuyaphindwa. Njengomphumela walokhu, kukhona ukusabela okuvela ezikhundleni zokuthenga futhi okuholela ekutheni ukwazi ukuthenga amasheya ukuzama ukwenza ukonga kube nenzuzo ngesikhathi esifushane. Kuze kube yilapho izintshisekelo phakathi kwabalingisi kule nqubo zilinganisiwe. Ngaleso sikhathi, kuzobe sekuyisikhathi sokuthi uhlehlise izikhundla bese uqoqa izinzuzo ezinkulu ezikhiqizwe ekuthengeni kwakho.
Njengoba ubonile kuze kube manje, kunamazinga amaningi wokungena okufanele ukwenze kube semthethweni ukuthenga kwakho, kepha ngeziqinisekiso eziningi zempumelelo. Ngaphandle kokuhlaziywa okujulile kwazo zonke izibalo esikuvezele zona ukwenza imali etshalomali inenzuzo. Ukwazi ukuthi kufanele kuhambisane nomsebenzi omuhle wokuthengisa. Kuzoba yisimo esihle kakhulu kusuka manje. Lapho inhlanhla izoba ngesinye sezici ezinquma umphumela wokutshalwa kwemali kwakho. Kunoma ikuphi, unezibalo eziningana `zokunqoba izinhloso ngendlela esheshayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Imikhiqizo yezezimali » Ibha » Yiziphi izimpawu ezikumema ukuthi uthenge emakethe yamasheya?
Shintsha imali ebanjiswayo yasebhange
Yimiphi imikhakha engazuza ekukhuphukeni kwamazinga?